မာမာအေး | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
Mar Mar Aye - 412
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၇၆) – Mar Mar Aye
မာမာအေး ဧပြီ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၃ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ … အမေရိကါးက...
Mar Mar Aye – 476
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၇၆)မာမာအေးဧပြီ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၃ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ …...
နောင်တ မာမာအေး မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၃ ယခုလဆန်းပိုင်း ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာန http://www.bbc.co.uk/burmese/ ၏ အသံလွှင့်ချက်ကို ကူးယူ ဖော်ပြသည်။ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် …မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ...
ဂီတပညာရှင်ကြီး ဒေါ်မာမာအေး အမေရိကန်သို့ ပြန်လည်ရောက်ချိန် စကားစမြီ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ မတ် ၁၁ လွန်ခဲ့သည့် မတ်လဆန်းက ဂီတပညာရှင်ကြီး အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေးသည် သူ၏ဒုတိယအိမ်ဖြစ်သည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖို့ဝိန်းမြို့တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ...
တက္ကသိုလ် မာမာအေး မတ် ၉ ၊ ၂၀၁၃ ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာန http://www.bbc.co.uk/burmese/ ၏ ဒီဇင်ဘာလ အသံလွှင့်ချက်ကို ကူးယူ ဖော်ပြသည်။ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ...
ပန်းကောက်လှဲ့ပါ – Mar Mar Aye
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၆၁) မာမာအေး မတ် ၂ ၊ ၂၀၁၃ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း...
ပြဇါတ်သီချင်း – Mar Mar Aye – 460
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၆၀) မာမာအေး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၃ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။...
တက္ကသိုလ်စိုး မာမာအေး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၅၈) – Mar Mar Aye
ခင်မောင်တိုး အမှတ်တရ မာမာအေး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်း ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာန http://www.bbc.co.uk/burmese/ ၏ အသံလွှင့်ချက်ကို ကူးယူ ဖော်ပြသည်။အသည်းအသန် ဖြစ်နေသော အဆိုတော်...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၅၅) – Mar Mar Aye
သတင်းကျွတ် (သို့) သန်တူလ မာမာအေး ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၃ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ...
သီဟာနုရဲ့ စန္ဒာ – Mar Mar Aye – 454
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၅၄) မာမာအေး ဇန်န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ သောတရှင်များ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော မာမာအေး ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ No tags for...
အောင်လင်း (သို့မဟုတ်) ကိုတင်ဖေ မာမာအေး ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် …မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး No tags for this post. Related posts...
ဂီတအနုပညာရှင်ကြီး (ဒေါ်) မာမာအေး ဒီဇင်ဘာ ၇၊ မြန်မာပြည် ခေတ္တ ပြန်လာမည် မိုးမခ၊ (ဒေါ်) မာမာအေးဖေ့စ်ဘွတ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၂ (ဒေါ်) မာမာအေးရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း...
မာမာအေး ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး No tags for this post. Related posts No related posts.
အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ မာမာအေး နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ … ဒီကနေ့တော့...